Izindaba - Isifinyezo Sombukiso WangoSepthemba
Kule Fair, silungiselela imishini emibili edokodweni lethu.
Inombolo No.: MT-101-3
Igama: Egg lokulinganisa kanye nokupakisha umshini
1. Amandla: iqanda le-25000-30000 ngehora
2. Xhuma nolayini wokuqoqa omaphakathi noma umugqa wokukhiqiza amaqanda
3. Ukufaka amaqanda ngesisindo futhi ulayishe i-automaticaly, lungisa ikhanda elikhulu ngaphambili, uzuze ngokugcina.
4. Isikrini sokuthinta se-LCD, kulula ukusetha isisindo samabanga ahlukene.
5. Ifanele amaqanda wephepha le-30 noma itreyi lepulasitiki.
6. I-denester ezenzakalelayo noma i-Semi-automatic denester
Umshini wokugaya nokufaka amaqanda we-MT-101 wenzelwe ukuhlangabezana nezidingo "zerokhethi" zokusebenza kahle kanye nempilo yokudla ekucutshungweni kwamaqanda. Ukuhlangana kakhulu namakhasimende ethu kwenza imishini yethu idume kakhulu emakethe, futhi isisize siphumelele ngokwengeziwe. Ukucushwa okungakhethwa kungangezwa njengoba kune-modular system eguquguqukayo. Kufanele iziteshi zokupakisha amaqanda nepulazi leqanda lezinkukhu. Kuningi okuthakazelisayo phakathi kwe-Fair.
MT-110S Egg ukupakisha umshini, obizwa nangokuthi ipulazi packer. Ingakwazi ukuphatha ngeqanda elingu-25000-30000 ngehora. Idume kakhulu epulazini lezendlalelo. Xhuma umugqa weqoqo maphakathi ngqo, ulayishe amaqanda ngokuzenzakalela, wehlise umthwalo.
Le mishini ithengise izingcezu ezingaphezu kwama-200, ungathola imishini yethu cishe kuzo zonke izifundazwe zaseChina. Singakwazi ukuhlela ukuvakasha nganoma yisiphi isikhathi. Ungalokothi ubuyele emuva. Amakhasimende amaningi ayibuza ngesikhathi se-Fair.
I-VIV Qingdao 2020
Le Fair sakhombisa nepakethe yethu yokupakisha epulazini lethu. Njengoba iCovid-19 isasabalala emhlabeni wonke, amakhasimende aphesheya abengasitholi isikhathi sokuvakashela le Fair. Kodwa sisenabantu abaningi abavakashile.
Kwangathi singahlangana e-Next CHINA ANIMAL HUSBANDRY EXPO nase-VIV Qingdao 2021.
Egg Ukupakisha Machine, Okuzenzakalelayo Egg Breaking Machine, Umshini Wokubhoboza Iqanda Elibilisiwe, Iqanda Ukuhlela Futhi Ukupakisha Machine, Ukuchamisela Iqanda Packer, Abakhiqizi Bomshini Wokuphula Amaqanda,